I-Seychelles ibuyisa iMbasa: Indawo ekuyiwa kuyo kwisiqithi esiphambili e-Afrika nakuMbindi Mpuma
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles ibuyisa iMbasa: Indawo ekuyiwa kuyo kwisiqithi esiphambili e-Afrika nakuMbindi Mpuma
Awards • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuhamba kweSeychelles + uLonwabo
I-Seychelles ilubethe ukhuphiswano kwakhona njengoko lwaphinda lwabuya okwesine, iwonga elaziwa kakhulu lokuHamba + lokuPhumla eliyi-2021 kwihlabathi liphela njengeyona ndawo iphambili kwisiqithi e-Afrika nakuMbindi Mpuma.
Omnye wabafundi beTourism + Leisure uchaze iSeychelles “njengommangaliso wesibhozo wehlabathi.”
Indawo ekuyiwa kuyo ivele phezulu kudidi lwayo, inamanqaku angama-88.
I-Seychelles yaziwa kakhulu ngendawo egcinwe ngokugqibeleleyo efana neVallée de Mai, enye yeendawo ezili-115 zeziqithi ezikwii-UNESCO zeLifa leMveli elizinikele eluntwini.
Ukubanga indawo yeNombolo 1 (eyayibanjelwe nakwi-2019), iSeychelles, iparadesi eyaziwayo eyayibekwe kuLwandlekazi lwaseIndiya, kunye "nommangaliso wesibhozo wehlabathi" njengomfundi omnye weTourism + Leisure, eyincoma "ngokubalasela kwayo" , ”Uphume phambili kwicandelo lakhe, efumana amanqaku angama-88, aze alandelwe yiZanzibar neMauritius kwindawo yesibini neyesithathu ngokwahlukeneyo.
Ukuma kwalo nyaka kukude kakhulu kunangaphambili, iphephancwadi lathi, libhengeza iziphumo zophando ezivumela abafundi ukuba bacinge ngamava abo okuhamba, kwaye bacebise ukuxabisa okuhlaziyiweyo kweendawo ezinikezela ngobuhle bendalo obungenakuthelekiswa nanto kwaye, kwiindawo ezininzi, bambalwa izihlwele. Amagqabantshintshi amabhaso akhuthaza abahambi njengoko befuna awona mava anomvuzo kwihlabathi liphela.
Ukuqhayisa uhlaza oluhlaza, iilwandle ezimhlophe ezimhlophe, indawo entle, engaqhelekanga kunye namanzi acocekileyo, iiSeychelles ikwaziwa kakhulu ngeendawo zayo zendalo ezigcinwe ngokugqibeleleyo ezifana neVallée de Mai, enye yee-archipelago eziqithiweyo ezili-115 kwiindawo ezimbini ze-UNESCO zeLifa leMveli ezinikezelwe eluntwini, iintyatyambo zayo ezizodwa kunye nezilwanyana kunye neepaki zayo zaselwandle, zonke ezo zinto zinomdla wokuHamba & Abafundi bokuzonwabisa.
Ethetha ngeli bhaso, UNksk Bernadette Willemin, uMlawuli-Jikelele weNtengiso ye Seychelles yoKhenketho uchaze ukuba ukwamkelwa okubalulekileyo lilungelo kwindawo ekuyiwa kuyo.
“Ukubizwa njengeyona siQithi siHlabathi siBalaseleyo e-Afrika nase-Middle East kwakhona, kuyonwabisa kwindawo yethu encinci. Kuyomeleza ishishini ngokubanzi ukwazi ukuba iindwendwe zethu aziqapheli ubuhle bendalo besiqithi sethu kuphela kodwa namava onke asenza sahluke kwaye ngokuqinisekileyo 'lelinye ilizwe.' ”
Ukutyunjwa kwendawo ekungaqhelekanga kuyo kubangelwa kuvavanyo lonyaka oluqhutywa luTyelelo + lokuHamba, oluvumela abafundi beMagazini yaseNew York yokuhamba ukuba bavavanye amava abo okuhamba kwihlabathi liphela. Abafundi balinganisa iihotele eziphezulu, iziqithi, iidolophu, iinqwelomoya, iinqanawa zokuhamba ngeenqanawa, iiaspas, nokunye, ukulinganisa iziqithi kwezi zinto zilandelayo: iindawo ezinomtsalane zendalo kunye nolwandle, imisebenzi kunye nokubona, iivenkile zokutya kunye nokutya, abantu kunye nobuhlobo, kunye nexabiso lilonke. I-Seychelles iboshwe kwi-Nr 24 kunye neSri Lanka kwiziqithi eziphambili zeli phephancwadi kumabhaso ehlabathi.
Uphando lweeMbasa zeHlabathi eziBalaseleyo kulo nyaka luvulelekile ukuvota ngoJanuwari 11 ukuya kuMeyi 10, 2021, njengoko iindawo kwihlabathi liphela beziphakamisa izithintelo ze-COVID-19.